ဒီနှစ်နွေမှာ ယူနိက်တက် ကြုံရမယ့် အကြီးမားဆုံးပြဿနာ တစ်ခု – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းအနေနဲ့ လက်ရှိမှာတော့ အသင်းရဲ့လျော့ရဲနေတဲ့ နေရာတွေကို အင်အားဖြည့်ဖို့လူသစ်ခေါ်ရေးစီမံချက်တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ယူနိက်တက်တို့ဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ကာလရှည် ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းကဆန်ချိုကို လက်တွေ့ကျကျ ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်းဒေါ့မွန်အသင်းက တောင်ပံကစားသမား ဆန်ချိုအတွက် ယူနိက်တက်ဘက်က ယူရို 78သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဒေါ့မွန်အသင်းကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဘက်ကို ဒေါ့မွန်အသင်းကနေ ယူရိုသန်း ၉၀+၅သန်းတောင်းဆိုလိုက်ပြီး ငွေပေးချေမှုကိုလည်း ၅နှစ်အရစ်ကျထက်နည်းတဲ့ အချိန်အတွင်းလိုချင်တယ်လို့ ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသင်း၂သင်းကြားဈေးညှိတာမှာ ကွာဟချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပဲ ကစားသမားနဲ့လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသဘောတူညီမှုရပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဘက်က ဒေါ့မွန်အသင်းတောင်းတဲ့ဈေးကိုဘယ်လောက်ထိညှိနှိုင်းပြီးပေးသွားမယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အနေနဲ့ ၃နှစ်ကြာပစ်မှတ်ထား စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဆန်ချိုကို ဒီနှစ်နွေမှာ အရခေါ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခင်မှာသတင်းကောင်းကြားရမယ်လို့တော့သုံးသပ်ရပါတယ်။
ဒါဟာ ဒီနှစ်နွေမှာ ကြုံရတဲ့လူသစ်ခေါ်ရေး ပြဿနာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ယူနိက်တက်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေထဲကတစ်ခုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိက်တက်တို့ရဲ့Biggest Problemနောက်တစ်ခုက ဒီနွေမှာဂိုးသမားပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒေးဗစ်ဒီဂီယာက ၂၀၁၁ခုနှစ်တည်းကနေ အခုထိ ယူနိက်တက်ရဲ့ နံပါတ်တစ် ဂိုးသမားနေရာကို ယူထားပြီး လစာငွေအများဆုံးပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒိဂီယာဟာ နောက်ဆုံး ယူရိုပါလိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ပယ်နတီ ၁၁လုံးတစ်လုံးမှ မမိတဲ့အပြင် ပယ်နတီကန်တာကိုပါ လွဲချော်သွားခဲ့ရလို့ ပရိတ်သတ်တွေက ဒီဂီယာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သူဟာ အသင်းရဲ့ အရံဂိုးသမားနေရာကို မတ်လနောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲခံထားခဲ့ရတာကြောင့် အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ သတင်းကြီးနေတာပါ။
ဒါပေမယ့် မကြာခင်ကပဲ ဒီဂီယာကတော့ အသင်းမှာပဲဆက်နေပြီး နံပါတ်တစ်နေရာပြန်ရောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ရှက်ဖီးအသင်းမှာလက်စွမ်းပြပြီး ပြန်လာခဲ့တဲ့ လူငယ်ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန်ဟာ ဒီရာသီမှာ ယူနိက်တက်အတွက်လက်စွမ်းပြထားပြီး နံပါတ်၁ဂိုးသမားနေရာကိုသူသာအရသင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းခိုင်ခိုင်မာမာပြောကြားထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နံပါတ်၁ဂိုးသမားနေရာကို ယူနိက်တက်ဘက်က မပေးဘူးဆိုရင်တော့ အသင်းကနေထွက်သွားတော့မယ်လို့ အသက်၂၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂိုးသမားဟန်ဒါဆန်ကပြောကြားထားပါတယ်။
လတ်တလောနိုင်ငံတကာအားကစားသုံးသပ်သူတွေရေးထားတာကတော့ ဒီဂီယာဟာအသင်းမှာပဲဆက်နေသွားဖို့ရှိနေပြီး အသက်၂၄နစ်အရွယ်ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန်ကတော့ အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့မသေချာဘူးလို့ရေးထားကြပါတယ်။
ယူနိက်တက်တို့ဟာ ဒီနွေမှာ ပထမဆုံးကစားသမားခေါ်ယူတဲ့အနေနဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်ဂိုးသမား တွမ်ဟန်တန်ကိုလည်း ပြန်လည်ခေါ်ယူထားတာဖြစ်လို့ဒီနွေမှာ Goal keeper Positionဟာ ယူနိက်တက်တို့ကြုံရမယ့်အကြီးမားဆုံးပြဿနာထဲကတစ်ခုပါပဲ။ပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ? ယူနိက်တက်က ဒီဂီယာကို ရောင်းထုတ်သွားပြီးဟန်ဒါဆန်ကိုနေရာပေးမလား? ဒီဂီယာကို အသင်းမှာဆက်ရှိစေပြီး ဟန်ဒါဆန်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမလား? နံပါတ်၁ဂိုးသမားကရောဘယ်သူဖြစ်သင့်သလဲ လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။